10 Ecommerce Maitiro Auchazoona Akaitwa muna 2017 | Martech Zone
Yakanga isiri nguva refu yapfuura kuti vatengi vanga vasina kunyatsogadzikana kupinda kwavo kadhi rechikwereti data online kuti vatenge. Ivo havana kuvimba nesaiti, havana kuvimba nechitoro, havana kuvimba nekutakura… ivo havana kuvimba nechinhu. Makore gare gare, zvakadaro, uye muvhareji mutengi ari kugadzira inopfuura hafu yezvose zvavanotenga online!
Yakasanganiswa nebasa rekutenga, kusarudzika kusarudzika kwema ecommerce mapuratifomu, kuenderera kusingaperi kwenzvimbo dzekugovera, uye dombo-repasi chinodzivirira kupinda… ecommerce iri kukwirisa mune zvese kusanzwisisika uye kukura. Kuchengeta izvo mundangariro, zvakakosha kuti usatarisira pasi kuti uchaita sei kusiyanisa chitoro chako pamhepo.
SSL2Buy, wepasirese SSL mupi, akauya nemakumi eCommerce maitiro ekutarisa muna 2017 akaunganidzwa mune ino yakanaka infographic:
Kupera kweChishanu Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro - nekuti haufanire kusiya mubhedha wako urwe mumitsara, ecommerce iri kudzikamisa kukanganisa kwemazuva ano ekutengesa uye maitiro ekutenga ari kupararira kumwedzi wese Cyber ​​Mbudzi.
Zvimwe Zvakasarudzika uye Zvakasimba Zvekutenga Zviitiko - mapuratifomu anoteedzera zvisarudzo zvekutenga uye maitiro anozopedzisira ave akarurama uye anogona kubatsira muzvitoro zvepamhepo zvinopa hunhu hwakasarudzika hunoderedza kutenga kukakavara uye nekupa kurudziro yechigadzirwa inonyatsodiwa nevatengi.
Vatengi vachabatana neArtificial Intelligence -Kutenga, kubhuka, uye vatengi vatengi chatbots ichave nemazvo uye nenzira kwayo kupindura pamhepo mibvunzo yekutenga, kuvandudza ruzivo rweecommerce, kushandisa vashandisi, uye kuvatyaira kuti vawedzere mutengo wengoro yekutengesa uku uchidzikisa kusiiwa.
Kufanotaura nenzira kwayo Mutengi Anotevera Kutenga - Iko kugona kuunganidza uye kuongorora dhata hombe kuri kupa yakanyatso fungidzira uye fungidziro mamodheru ayo ari kushandiswa kuisa zvinopihwa pamberi pemutengi panguva chaiyo yavanenge vachida iyo.
Ita kuti ruzivo rwe mobile ruve rwakanaka sezvinobvira - Nhare yakapfuura desktop kune vatengi vepamhepo vachivhura uye kutsvagisa yavo inotevera chigadzirwa chigadzirwa. Google iri kugovera yakasarudzika indekisi yemafoni inoda kuti mabhizinesi atore nhare yekutanga nzira yekuvandudza yavo e-commerce saiti.
Kuwedzera kwakafanana-kwezuva kuburitsa - 29% yevatengi vataura kuti vangazobhadhara zvakawedzera pakuburitswa kwezuva rimwe-chete Hazvishamise kuti nei vatungamiriri vakaita seAmazon vaunza sevhisi kumusika, vachienderera mberi vachikanda pakudikanwa kwekushanyira nzvimbo yekutengesa iri padyo.
Kutengesa zvemagariro - 70% yevatengi vanokurudzirwa nemazita ezvechigadzirwa uye zvigadzirwa pane zvemagariro enhau Kugogodza pasocial media nekuwedzera ruzivo rwekuratidzira uye kukurudzira ikozvino kuri kutyaira kutengesa, kukurudzira vashambadziri kuti vagadzire emhando yepamusoro nzira dzevanhu.
Inodiwa HTTPS mugore re2017 - Pasina kubatana kweSSSL, vatengi uye ecommerce vanopa vanogona kubata data rakabiwa kana masystem akabiwa. Google yatosimbisa SSL yakaunzwa munzvimbo dzekumisikidza algorithms, inguva yekuchengetedza yega yega saiti yauinayo iyo data iri kuunganidzwa kana kupfuudzwa.
Kutengesa omni-chiteshi - Vatengi veMultichannel vanopedza kanopfuura katatu zvakapetwa kupfuura vatengi-vechiteshi-chete vanoda kuti vashambadzi vavake mishandirapamwe yakaoma inoteedzera vangangoita vatengi uye vovaendesa kunotenga kunyangwe vari muchitoro, nharembozha, kana chero pakati.
Chigadzirwa kumakisazve - Pakati nepakati, zvinoda zvinomwe zvekubata usati watungamira mutengi kudzosera Kumakisheni ikozvino iri zano rakakosha kune wese ecommerce mushambadzi.
Ita shuwa yekufunga aya akakosha maitiro uchigadzira yako ecommerce kushambadzira zano nokuti 2017.
Tags: chakagadzirwa njerebig datamusi wezuvacyber mondaydhirivaharikushambadzira zvine simbaecommerce infographicecommerce maitirohttpsinfographicmobile shoppingomnichannel ecommerceomnichannel kutengesakudzokororakuendesa zuva rimwe chetescommercekutengesa magarirokutumirwakunotengaruzivo rwekutengazvekutengeseranazvemagariro ecommercekutengesa munharaundaSsl
10 Consumer Trends muna 2017… Iine Yambiro!